Ejipta: Fihaonambe ho an’ny famoahana ilay bilaogera; Notanana tany amin’ny toby miaramila ny iray hafa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Febroary 2019 4:20 GMT
(Marihina fa tamin'ny volana Desambra 2008 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Nivory Kairo tamin'ny 4 desambra 2008 ireo mpikatroka an-tserasera Ejiptiana mba hanaovana antso ho famotsorana ilay bilaogera Ejiptiana Mohamed Adel .
Nokarakarain'ny Komitin'ny Fahalalahana ao amin'ny sendikà ity hetsika natao tao amin'ny Press Syndicate ity ary nantenaina hahasarika bilaogera maromaro, mpikatroka politika sy olo-malaza.
Nandritra izany fotoana izany, ary araka ny voalazan'ny naman'i Adel sasany ,nitokona tsy nihinan-kanina nanomboka hatramin'ny nisamborana azy efa ho 10 andro mahery izay ilay tanora bilaogera .
Nilaza tamin'ilay bilaogera, Abdel-Monem Mahmoud ny loharanom-baovao avy amin'ny Mpirahalahy Miozolomana fa voasambotra i Adel noho ny sariny niaraka tamin'ny mpitarika ny hetsika Hamas. Nalaina tany Gaza ity sary ity ny volana Janoary 2008 raha nandray anjara tamin'ny filaharana nankany amin'ny faritra Gaza i Adel. Nilaza i Monem fa nilaza ny loharanom-baovao azony avy amin'ny Mpirahalahy Miozolomana hoe:
Nialoha ny fisamborana an'i Abdel Aziz Megahed ilay namany ny fisamborana an'i Mohamed Adel. Mpianatra mpikambana mpikatroka ao amin'ny Mpirahalahy Miozolomana ilay voatonona voalohany. Nosamborina i Megahed tamin'ny fiandohan'ny volana Novambra 2008, ary nogiazan'ny sampana fanadihadiana ao amin'ny Fiarovam-pirenena ny solosainany, izay nahitan'izy ireo ny sarin'ireo mpikambana roa ao amin'ny Mpirahalahy Miozolomana sy ny iray tamin'ireo mpitarika ny Hamas.
Io loharanom-baovao avy amin'ny Mpirahalahy Miozolomana io ihany no nilaza tamin'i Moniem, fa nampahafantarina izy momba ny fampijaliana ireo tanora roa nosamborina ireo tao amin'ny foiben'ny Fiarovam-pirenena tao Nasr, Kairo.
Voatazona tany amin'ny toby miaramila nandritra izany ilay bilaogera Mohamed Khairi. Fantatra fa noheverina ho nalaina an-keriny ireo notazonina tany amin'iireny toby ireny satria notazonina tsy misy didy fampisamborana avy amin'ny mpampanoa lalàna izy ireo ary tsy azo tsidihina, satria tsy ara-dalàna ny fitazonana azy ireo ary any amin'ny foibem-pamonjana tsy ara-dalàna koa.
Tamin'ny 22 Oktobra 2008 i Khairi no nosamborina voalohany ary navotsotra ny 4 Novambra 2008. Talohan'ny namotsorana azy dia nanome baiko azy ny mpitandro ny filaminana mba hakatona ny bilaoginy ary hatsahatra ny fanoratany lahatsoratra saingy tsy nanaraka ny baiko izy. Nosamborin'ny mpitandro filaminana indray izy noho izany ny 16 Novambra 2008, 12 andro taorian'ny famoahana azy voalohany. Nandidy ny famotsorana azy indray ny mpampanoa lalàna, saingy nentin'ny mpitandro filaminana tany amin'ny tobin'ny tafika izy, izay nitazonana azy.
Naneho ny ahiahiny momba izany ny Tambajotra Arabo misahana ny Zon'olombelona ary nampitandrina fa mety iharan'ny fampijaliana ilay bilaogera:
Mbola nampiasain'ireo mpitandro filaminana indray ny tobin'ny tafika mba hitazonana ireo mpanohitra ara-politika sy ireo mpikatroka. Tsy eo ambany fiahian'ny lehiben'ny fampanoavana na ny sampan-draharaham-panjakana hafa rehetra ireo tobin'ny tafika ireo, ary nampiasaina matetika izany mba hitanana ireo Islamika mahery fihetsika tamin'ny taompolo 1990, izay nampiharana fampijaliana tsy misy fanaraha-mason'ny fitsarana.